ကနြျော အိပျမကျ မကျနတော ဖွဈမှာပါ…………#ယာဂနျကလော့ပျ - SPORTS MYANMAR
ကနြျော အိပျမကျ မကျနတော ဖွဈမှာပါ…………#ယာဂနျကလော့ပျ
ပထမဆုံး အနနေဲ့တော့ နညျးနညျးလေး ရှကျစရာ ကောငျးတဲ့ အကွောငျးအရာ တဈခုနဲ့ စတငျခငျြပါတယျ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဘောလုံး ပရိသတျတှေ က ကနြျောတို့လို မနျနဂြောတှေ ၊ ကှငျးထဲက ဘောလုံး သမားတှေ ဆိုရငျ ဘုရားသခငျတှေ လို့ မှတျယူထားကွလို့ပါ။ ကနြျော ကတော့ အဲဒီ အကွောငျးနဲ့ ပတျသကျလို့ စိုးရိမျမိပါတယျ။
ကနြျောလဲ ခရဈယာနျ တဈယောကျ ဆိုတော့ တဈဦးတညျးသော ဘုရားသခငျကို ယုံကွညျတာပါ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျော အခိုငျအမာ ပွောနိုငျတာ တဈခုက ဘုရားသခငျလဲ ဘောလုံး အပျေါမှာ ဘာမှ လုပျပေးလို့ မရပါဘူး။ တကယျ့ အမှနျတရားက ကနြျောတို့ဟာ အမွဲတမျးလိုလို ကရြှုံးမှုတှေ နဲ့ ရငျဆိုငျနကွေရတာပါ။
ကနြျော မနျနဂြော ပေါကျစ တုနျး ကဆိုရငျ ကရြှုံးမှုတှကေ အရမျးကို ကွီးမားလှနျးခဲ့ပါတယျ။
ဟိုတဈနေ့ ည ကတော့ ကနြျောဟာ ဖီဖာ အကောငျးဆုံး နညျးပွဆုကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့တယျလေ ဒါပမေယျ့ ဆုဖလားလေး တဈလုံးထဲ ရယူပွီး ၊ စငျမွငျ့ထကျမှာ အဲဒီဆု ကို တကျယူနတေဲ့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပွနျမွငျရတာ လုံးဝ သဘောမကပြါဘူး။ တကယျတော့ အဲဒီ ဗိုလျလုပှဲမှာ အနိုငျရခဲ့တယျ ဆိုတာ ကလဲ ကနြေျာ့ ရဲ့ ဘေးနားမှာ ရှိတဲ့ လူတှေ နဲ့လဲ အမြားကွီး သကျဆိုငျပါတယျ။ ဒါဟာ ကနြေျာ့ ကစားသမားတှခေညျြးပဲ တျောလို့ မဟုတျသလို ၊ ကလပျအသငျးက လူတှေ ၊ နညျးပွ အဖှဲ့ဝငျတှေ ၊ ပရိသတျတှေ ရဲ့ အားပေးမှုတှနေဲ့ တဈနညျးတဈဖုံတော့ သကျဆိုငျနမှောပါ။ နောကျဆုံး ကနြေျာ့ကို နညျးပွ ဘ၀ တဈလြှောကျ ဒီအဆငျ့မြိုး အထိ တကျလှမျးနိုငျအောငျ ကူညီပေးခဲ့ကွတဲ့ ကနြေျာ့ မိသားစုဝငျတှေ နဲ့လဲ ပတျသကျနလေိမျ့မယျ ထငျပါတယျ။
အမှနျတိုငျး ဝနျခံရရငျ ကနြေျာ့ အသကျ 20 လောကျ ကသာ ၊ အခုလို အဖွဈအပကျြတှေ နဲ့ အနာဂတျမှာ ရငျဆိုငျရလိမျ့မယျလို့ ဗဒေငျဟောမယျ့သူသာ ရှိခဲ့ရငျ ကနြျောက လုံးဝကို ယုံကွညျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီ အရှယျမှာ ရုနျးကနျခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ ရဲ့ သငျခနျးစာတှကွေောငျ့ပဲ ကနြေျာ့ ရဲ့ ဘဝဟာ အမြားကွီးပွောငျးလဲ သှားခဲ့ရတာပါ။
အဲဒီ အခြိနျက ကိုယျ့ကိုကိုယျ ကို လူငယျ တဈယောကျလို့ သတျမှတျထားခဲ့သညျ့တိုငျအောငျ ၊ ကလေး အဖဆေိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျ တဈခုလဲ ပိုငျဆိုငျနခေဲ့ပွီလေ။ ပွောရရငျ အသငျ့မဖွဈသေးပဲ နဲ့ ကလေး တဈယောကျ ပိုငျဆိုငျလာခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီ အခြိနျက ကနြျောဟာ အပြျောတမျးအဆငျ့ ဘောလုံးသမား အဖွဈပဲ ရှိနသေေးသလို ၊ တဈဖကျမှာလဲ တက်ကသိုလျ တကျနတေုနျးလေ။
ကြောငျးလခ ပေးဖို့အတှကျ ရုပျရှငျ တဈရုံမှာ အလုပျလုပျရငျး တဈဖကျ တဈလမျးကနေ ဝငျငှလေဲ ရှာခဲ့ရသေးတာပေါ့ဗြာ။ အဲဒီ အခြိနျက ရုပျရှငျဆိုတာ အခုလို DVD ခတျေ မဟုတျသေးသလို ၊ ဖလငျခတျေပဲ ရှိသေးတာဆိုတော့ ၊ မနကျ6နာရီ ဆိုတာ နဲ့ ဖလငျလိပျကွီးတှေ ထညျ့ထားတဲ့ ပုံးကွီးတှကေို ကားပျေါက တငျလိုကျ ၊ ခလြိုကျ နဲ့ အလုပျရှုပျနခေဲ့ပါပွီ။ ပုံးတှကေလဲ တျောတျောလေးတာမို့ တကယျကို ပငျပနျးတာပါ။ တဈခါ တဈလေ ကိုယျ့ကိုကိုယျ Ben-Hur ဇာတျကားထဲက ဇာတျကောငျလိုမြိး အပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈလာဖို့တောငျ ဆုတောငျးနခေဲ့မိပါတယျ။
ဘ၀ ဆိုးခဲ့ပုံက တဈညမှ5နာရီလောကျသာ အိပျခဲ့ရတာလေ။ မနကျခငျးဆို ရုပျရှငျ ဖလငျတှေ ထားတဲ့ ဂိုဒေါငျ ပွေးပွီး အလုပျလုပျရတယျ ၊ အဲဒီ က ပွီးတာနဲ့ ကြောငျးကို ပွေးရတယျ ၊ ညဘကျရောကျတော့ ဘောလုံးအသငျးမှာ ထရိနျနငျ ပွနျဆငျးရတာပေါ့။ ကိုယျ့ ဆန်ဒကတော့ အိမျကို စောစောပွနျလာပွီး ကိုယျ့သားလေး နဲ့ အခြိနျတှေ ဖွုနျးပဈခငျြတာပေါ့ဗြာ။
အဲဒီလို ခကျခဲတဲ့ ဘဝက ပဲ ကနြေျာ့ကို သငျခနျးစာတှေ အမြားကွီး သငျပေးလိုကျတာပါ။ ငယျငယျရှယျရှယျ နဲ့ အလုပျကို အာရုံစိုကျပွီး လုပျတတျတယျလာတယျလေ။
ညဘကျ ဘျောဒါတှေ နဲ့ ဆုံလို့ သူတို့က ဘီယာလေး သှားသောကျကွအောငျကှာလို့ ချေါလိုကျရငျ ၊ ကနြေျာ့ စိတျထဲမှာ “ အေး သှားမယျကှာ….သောကျကွမယျကှာ” လို့ ပွောနခေဲ့ပမေယျ့ ၊ တကယျတမျးတော့ မသှားဖွဈခဲ့တဲ့ အပွငျ သူတို့ရဲ့ ကမျးလှမျးမှုကို အကွိမျကွိမျ ငွငျးခဲ့ရတာပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကနြျောက လူပြိုလူလှတျ တဈယောကျ မဟုတျတော့ဘူးလေ။
လူတဈယောကျဟာ သူ့ရဲ့ သှေးသားကနေ ပေါကျဖှားလာတဲ့ ကလေးတဈယောကျ ရဲ့ အနာဂတျ အတှကျ စိုးရိမျစိတျတှေ ဝငျလာပွီ ဆိုရငျ ၊ အဲဒီ စိုးရိမျမှုဟာ ဘာနဲ့မှကို မတူတော့ပါဘူး။ ရငျဆိုငျရတာလဲ အရမျးကို ခကျခဲပါတယျ။ အခု ဘောလုံးကှငျးထဲမှာ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ အခကျအခဲတှေ ဆိုတာ အဲဒီ ခံစားခကျြနဲ့ ယှဉျကွညျ့လိုကျရငျ ဘာမှ ကို မဟုတျတာပါ။
တဈခါတလေ လီဗာပူး က အသငျးတဈသငျးကို ရှုံးနိမျ့လိမျ့လို့ ၊ ကနြျောက သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွုံွး့ပုံးရှငျရှငျ နဲ့ ပွနျပွီး မေးခှနျးတှေ ပွနျဖွနေရေငျ ၊ ခငျဗြား က ဘာလို့ အဲဒီလို ပွုံးထားနိုငျတာလဲ ဆိုပွီး လူတှကေ ခဏခဏ မေးကွပါတယျ။ အဲဒီ မေးခှနျးရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြ အဖွကေို ကနြေျာ့ သားလေး မှေးလာတဲ့ အခြိနျမှာ သိခှငျ့ရခဲ့တာပါ။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဘောလုံးဆိုတာ ဘ၀ ရဲ့ ဘ၀ တဈခုလုံးကွီး မဟုတျသလို ၊ သဆေုံးခွငျးလဲ မဟုတျပါဘူး။ ကနြျောတို့ ဘောလုံးကစားနတေယျ ဆိုတာ လူတှေ အသကျကို ကယျတငျဖို့ မဟုတျပါဘူး။ ဘောလုံး ဆိုတာ ပြျောရှငျမှု အပွညျ့နဲ့ ကစားရမယျ့ ကစားနညျးဖွဈပွီး ၊ လူတိုငျး အတှကျ စိတျဓါတျခှနျအားတှေ မှေးဖှားပေးတဲ့ အရာမြိုးပဲ ဖွဈသငျ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ လူငယျ မြိုးဆကျလေးတှေ အားကနြိုငျတဲ့ ကစားနညျးမြိုးပဲ ဖွဈရမှာပါ။
ဒီလို အလုံး သသေေးလေးကို ကနျရငျး ၊ ဘ၀ ရပျတညျမှုကို အခိုငျအမာ ရယူထားကွတဲ့ လူတှေ အမြားကွီး ကနြျော မွငျခဲ့ပွီးပါပွီ။ မိုဆာလတျ ၊ မာနေး ၊ ဖာမငျနို တို့ ဖွတျသနျးခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ ဆိုရငျ ဘယျလိုမှတောငျ မယုံကွညျနိုငျစရာ ကောငျးသလို ၊ အခွား ကစားသမားပေါငျး မွောကျမြားစှာလဲ ရှိနပေါတယျ။ ကနြျော လူငယျ ဘဝက ဂြာမဏီမှာ ရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ အခကျအခဲတှေ ဆိုတာ သူတို့တှေ နဲ့ ယှဉျကွညျ့လိုကျတော့ ဘာမှကို မဟုတျတော့တာပါ။ သူတို့ ဘဝတှမှော ဘောလုံး လောက ကနေ စှနျ့ခှာသှားခငျြလောကျတဲ့ အခိုကျအတနျ့တှေ က ခဏခဏကို ကွုံခဲ့ရပမေယျ့ သူတို့ ကတော့ လကျမွှောကျ အရှုံးပေးဖို့ ငွငျးဆနျပွီး ဒီလို အဆငျ့ထိ တကျလှမျးလာခဲ့ကွတာလေ။
သူတို့တှဟော ဘုရားသခငျတှေ မဟုတျပါဘူး ၊ နတျဘုရားတှေ လဲ မဟုတျပါဘူး ။ သူတို့ဟာ ကိုယျ့အိပျမကျကို ဘယျတော့မှ အရှုံးမပေးခဲ့ကွတဲ့ သူတှသော ဖွဈပါတယျ။
ကနြေျာ့ အထငျကတော့ ဘောလုံးဆိုတာ အမွဲတမျးလိုလို ရှုံးနိမျ့မှုတှေ နဲ့ ကွုံနရေတဲ့ ကစားနညျးလို့ ထငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မကျြနှာကို ပွုံးထားပွီး ၊ ကွိုးစားမယျ ဆိုရငျ နောကျတဈနမှေ့ာ ခွစှေမျး ပွနိုငျတာပဲလေ။
ကနြျောဆိုရငျလဲ အမှားပေါငျး မွှောကျမြားစှာကနေ သငျယူခဲ့ရတာပါ။ ပထမဆုံး နညျးပွ ဖွဈလာခဲ့တဲ့ အခြိနျက အခကျအခဲတှေ အမှားတှကေို ဘယျလိုမှ မမသေ့ေးပါဘူး။ ကနြျောဟာ မိနျ့ဇျမှာ 10 နှဈကြျော ကစားပေးပွီးတဲ့နောကျ ၊ 2001 ခုနှဈမှာ မနျနဂြော ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
စစခငျြး ရငျဆိုငျလိုကျရတဲ့ ပွသနာ က ဘောလုံးသမားတှေ အားလုံးက ကနြေျာ့ရဲ့ သူငယျခငျြးတှပေါ။ နခေ့ငျြး ညခငျြးကွီးပဲ နညျးပွ ဖွဈလာတာ ဆိုတော့ ၊ သူတို့က Boss ဆိုတဲ့ စကားတောငျ မချေါနိုငျပဲ Kloppo ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျး နဲ့ပဲ ဆကျလကျ ဝျေါချေါခဲ့ကွတာလေ။
ပထမဆုံး ကိုငျတှယျမယျ့ ပှဲစဉျအတှကျ ပှဲထှကျကစားသမား စာရငျး ကွငွောမယျလုပျတော့ ၊ ကစားသမား တဈယောကျခငျြးကို မကျြနှာခငျြးဆိုငျပွီး အသိပေး ပွောလိုကျရငျ ပိုကောငျးမယျ ဆိုပွီး တှေးမိခဲ့ဖူးပါတယျ။ တကယျတော့ အဲဒီ အိုကျဒီယာ က တျောတျောလေးကို ဆိုးလှနျးပါတယျ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကနြျောတို့မှာ နှဈခနျးတှဲ လေးပဲ နရော ရှိတာလေ။ စဉျးစားကွညျ့ပေါ့ဗြာ……….နရော က အမြားကွီး မရှိတော့ ကနြျောဟာ နညျးပွ တဈယောကျ ဖွဈနသေညျ့တိုငျအောငျ ဘယျလို နရောမှာထိုငျရမလဲ ဆိုတာ……
ပွီးရငျ တဈယောကျ နဲ့ တဈယောကျ မွငျနရေတဲ့ အနအေထားမှာတောငျ “ မနကျဖွနျ ပှဲမှာ မငျးကစားမယျ ၊ မငျးကတော့ မကစားဘူး” ဆိုတဲ့ စကားလုံးမြိုးကို ပွောခဲ့ရတာပါ။ ပွောတိုငျးလဲ ကစားခှငျ့မရတဲ့ သူတိုငျးက ဘာလို့လဲ ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြကို အမွဲတမျး အမေးခံခဲ့ရပါတယျ။
မြားသောအားဖွငျ့တော့ ကနြေျာ့မှာ သူတို့အတှကျ အဖွကေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ပွနျပွောနိုငျတာ တဈခုက ငါတို့မှာ 11 ယောကျပဲ ကစားခှငျ့ ရှိလို့ပါကှာ ဆိုတဲ့ စကားတဈခှနျးပါပဲ။
ကနြေျာ့ရဲ့ မနျနဂြော ဘ၀ က အဲဒီလို စတငျခဲ့ရတာဗြ။ 2019 ခုနှဈရဲ့ဖီဖာ အကောငျးဆုံး နညျးပွကွီးက အဲဒီဘ၀ ကနေ လာခဲ့တာလို့ ပွောလိုကျရငျ ပရိသတျတှေ ယုံနိုငျကွပါဦးမလား……
ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဘာစီလိုနာ ကို နူးကမျ့ကှငျးကွီးမှာ 3-0 နဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ ရလာဒျ က ကနြေျာ့ရဲ့ မနျနဂြော ဘဝမှာ အဆိုးဝါးဆုံး ရလာဒျ တဈခု ဖွဈမယျ ထငျပါတယျ။ ဒုတိယ အကြော့ ပွနျကစားဖို့ ပွငျဆငျတဲ့ အခြိနျရောကျတော့ ကနြျော လီဗာပူး ကစားသမားတှေ ကို မှာခဲ့တဲ့ စကားလုံးတှကေ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး နဲ့ ဒဲ့ပဲ ပွောခဲ့တာပါ။
ဒီပှဲမှာ Rocky ရုပျရှငျတှထေဲကတော့ ဖွဈလာမှာ မဟုတျပါဘူး ဆိုတာ ထညျ့ပွောဖွဈခဲ့သလို ၊ မြားသောအားဖွငျ့ နညျးစနဈ အကွောငျးတှကေိုပဲ အသားပေးခဲ့တာပါ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ ကို ပွောခဲ့တဲ့ အမှနျတရား တဈခုက
“ ငါတို့ဟာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှုး နှဈယောကျ မပါပဲ နဲ့ ကစားရတော့မယျ ၊ ကမ်ဘာပျေါက ဘောလုံးပရိသတျတှေ ကတော့ ဒီပှဲဟာ ပွနျလာနိုငျစရာ အကွောငျးမရှိတော့ဘူးလို့ ပွောနကွေပီ။
ငါလဲ အရိုးသားဆုံးပွောမယျကှာ…….သူတို့ ပွောသလို ဖွဈနိုငျခကြေ မရှိတော့တာ ဟုတျပါတယျ ဒါပမေယျ့ ဖွဈနိုငျခြေ ရှိတဲ့ အကွောငျးအရငျးက အဲဒီ ပှဲကို ရငျဆိုငျ ကစားရမှာက မငျးတို့ ကိုယျတိုငျ ဖွဈနလေို့ပါ။ မငျးတို့ကို ငါယုံတယျ ၊ ငါတို့မှာ အခှငျ့အရေး တဈခုတော့ ရှိနလေိမျ့မယျ” ဆိုပွီး ပွောခဲ့တာပါ။
တကယျတမျးလဲ ကနြေျာ့စိတျထဲမှာ အဲဒီအတိုငျးပါပဲ။ တဈခါတလေ ဘောလုံးသမားတှေ ကလဲ လူသားတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ ၊ ဘ၀ မှာ ရှိတဲ့ အခကျအခဲတှတေောငျကို ရငျဆိုငျ ကြျောဖွတျနိုငျစှမျးရှိတယျလေ။
နောကျဆုံး တဈခု အဖွဈ မှာလိုကျတာကတော့ “ ရှုံးခဲ့ရငျတောငျ ပရိသတျတှေ ဂုဏျယူနိုငျရမယျ့ ပုံစံမြိုး နဲ့ ရှုံးခဲ့ကွကှာ” ဆိုတဲ့ တဈခှနျးတော့ မှာခဲ့မိသေးတယျဗြာ။ ဒီလို ပွောရတာကလဲ ကနြျောက ကှငျးဘေးကနေ အျောနဖေို့က အရမျးလှယျပမေယျ့ ၊ တကယျတမျးကှငျးထဲမှာ ကစားရတဲ့သူတှေ အတှကျက အမြားကွီး ခကျခဲတယျလေ။ အနျဖီးကှငျးထဲကို ရောကျလာခဲ့တဲ့ ပရိသတျပေါငျး 54000 ကွောငျ့လဲ ကနြျောတို့ဟာ မဖွဈနိုငျတာ တဈခုကို ဖွဈအောငျ လုပျပွခဲ့ပါတယျ။
ဒါဟာ ဘောလုံးရဲ့ စဈမှနျတဲ့ အလှတရား တဈခုပါပဲ။ တဈဦးတဈယောကျထဲ ဖနျတီးလို့ မရတဲ့ အလှတရားမြိုးပေါ့ဗြာ……
အဲဒီ ထဲက ကံဆိုးတာက ခနျြပီယံလိဂျ သမိုငျးကွောငျး တဈလြှောကျလုံး သမိုငျးတှငျးသှားမယျ့ အိုရီဂီ ရဲ့ သှငျးဂိုး ကို ကနြျော သခြော မမွငျလိုကျရတာပါ။ အာနိုး ရဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျ တဈယောကျလို တှေးချေါပွီး ဖနျတီးပွသှားတဲ့ အနအေထားကို ကနြျော လှဲသှားတယျဗြာ။
ဘောလုံး ထောငျ့ကနျ ဘော ဖွဈသှားတာတော့ မွငျလိုကျရပါသေးတယျ။ အာနိုး က ကနျတော့မယျ ၊ ရှာကှီရီ က လိုကျသှားတဲ့ အထိ မွငျသေးတယျဗြ။ ကနြျောက လူစားလဲဖို့ ပွငျနတောမို့ ၊ ကြောခိုငျးပွီး ထိုငျခုံတနျးဆီ လှညျ့လာတဲ့ အခြိနျပါ ၊ ကနြေျာ့ ရဲ့ လကျထောကျနညျးပွကိုလဲ စကားပွောရငျး တိုငျပငျနပေါပွီ။
အဲဒီ အခြိနျမှာ ရုတျတရကျ ကွားလိုကျရတာက ပေါကျကှဲထှကျသှားတဲ့ အောငျပှဲခံတဲ့ အသံကွီးပါ။ လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ ဘောလုံးဟာ ဂိုးပိုကျထဲကို ရောကျသှားပါပွီ။
ကနြျောလဲ ဘနျဝုဒျဘနျ ဘကျလှညျ့တော့ ၊ သူက ဘာဖွဈသှားတာလဲ ဆိုပွီး လှမျးမေးပါတယျ ၊ ကနြျောလဲ မပွောပွတတျတော့ဘူး လို့ပဲ ပွနျဖွလေိုကျမိတာပါ။
အနျဖီးလျ ပရိသတျတှေ ကတော့ အမှနျအကနျ အောငျပှဲခံနကွေပါပွ….အဲဒီအခြိနျ လကျထောကျ နညျးပွက …ကဲ ဘော့ဈ လူစားလဲဦးမလား? ဆိုပွီး မေးလိုကျတော့ ကနြျောဖွငျ့ ပွုံးစိစိ ဖွဈနတော အခုထိ မကျြစိထဲက မထှကျသေးပါဘး။
စဉျးစားကွညျ့ဗြာ…….နညျးပွ လုပျလာတာ 18 နှဈ ရှိပွီ ၊ ဘောလုံးပှဲတှေ ကွညျ့လာတာ နာရီပေါငျး သနျး ခြီနပွေီ ၊ ဒီထဲကမှ ကနြေျာ့ အသငျးရဲ့ သမိုငျးဝငျ ဂိုးသှငျးတဲ့ အခိုကျအတနျ့လေး တဈခုကို ကနြျော လှဲခြျောသှားခဲ့တာလေ။ အဲဒီ လို ဖွဈပွီးကတညျးက ကနြျောဖွငျ့ အိုရီဂီရဲ့ သှငျးဂိုး ကို ပွနျကွညျ့နမေိတာ အကွိမျပေါငျး5သိနျး မကလောကျတော့ပါဘူး။
ပှဲပွီးတော့ အခနျးငယျလေးထဲမှာ ထိုငျနမေိပါတယျ။ ဘီယာတှေ သောကျပွီးလဲ အောငျပှဲ မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ရဗေူးလေး ဘေးမှာခလြို့ ၊ တဈယောကျထဲ တိတျတိတျဆိတျဆိတျ နရေငျး ပွုံးနမေိတယျဗြာ။ အဲဒီ အခိုကျအတနျ့မှာ ဖွဈလာတဲ့ ပီတိတှေ ၊ ပြျောရှငျမှုတှကေို ကနြျောဖွငျ့ ဘယျလိုမှကို စကားလုံးနဲ့ ဖျောပွနိုငျစှမျး မရှိတာပါ။
အိမျပွနျရောကျတော့ ဆှမြေိုးတှေ ၊ မိတျတှတှေေ အားလုံးက ရောကျနှငျ့နပေါပွီ ၊ အဲဒီ ကမြှပဲ ပါတီပှဲ အကွီးကွီး လုပျရငျး အောငျပှဲခံပဈလိုကျပါတယျ။ တဈညလုံး စိတျလှုပျရှားလှနျးပွီး မောမော နဲ့ အိပျပြျောသှားတာ မနကျကမြှ ပွနျစဉျးစားမိတယျ။
“တဈဘဝလုံး အိပျစကျခဲ့တဲ့ ညတှထေဲမှာ ဒီည အိပျရတာ အရသာ အရှိဆုံးပဲ” လို့။
ကနြေျာ့ အတှကျ ဘောလုံးဆိုတာ ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ ထကျပိုပွီး စိတျဓါတျခှနျအားတှေ မှေးဖှားပေးတဲ့ အရာတဈခုပါ။ Rocky ဆိုတာ ဇာတျလမျးအသှငျ ဖနျတီးထားတာဖွဈပမေယျ့ ၊ ကနြျောတို့က အဲဒီလိုမြိုး ဘောလုံးမှာ စှမျးဆောငျ ပွနိုငျခဲ့ပါပွီ။
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျ အတှငျးမှာ မာတာ ၊ ဟမျးမဲ၊ မီဂနျ ရာပီနိုးတို့ လုပျဆောငျနတေဲ့ Common Goal အစီအစဉျနဲ့ ပတျသကျပွီး တျောတျောလေးကို သဘောကမြိခဲ့တာပါ။ သူတို့ရဲ့လုပျဆောငျခကျြတှကေ အရမျးကို ခြီးကြူးဖို့ ကောငျးပါတယျ။ ဘောလုံးသမား အဖှဲ့ဝငျပေါငျး 120 ကြျောက သူတို့လစာ ရဲ့ 1% ကို ထညျ့သှငျးလှူဒါနျးပွီး ၊ ကမ်ဘာတဈဝနျးမှာ ဘောလုံးတိုးတကျရေး လုပျဆောငျနတေဲ့ အဖှဲ့တှကေို ကူညီပေးခဲ့နခေဲ့တာပါ။
ဒါဟာ ခမျြးသာတဲ့ ဘောလုံးသမားတှပေဲ လုပျနကွေတာ မဟုတျပါဘူး ၊ ကနဒေါ အမြိုးသမီး လကျရှေးစငျ တဈသငျးလုံးဆိုရငျ ဒီအဖှဲ့ထဲမှာ ပါဝငျသလို ၊ ဂပြနျ ၊ သွစတေးလြ ၊ ကငျညာ ၊ ဂါနာ တို့လို နိုငျငံက ဘောလုံးသမားတှတေောငျ ပါဝငျနပေါပွီ။ ဒါဟာ အနာဂတျ မြိုးဆကျတှေ အတှကျ စိတျဓါတျပိုငျး ဆိုငျရာ တကျကွှကျမှုတှေ ဖွဈပျေါလာစဖေို့ လုပျဆောငျနတေဲ့ ပရဟိတ လုပျငနျးမြိုး ဖွဈသလို ၊ ဘောလုံးရဲ့ ရညျရှယျခကျြ သဘောတရားကလဲ ဒါပဲလေ။
ကနြျောလဲ အဲဒီ လို အဖှဲ့အစညျးမြိုးရဲ့ အစိတျအပိုငျး တဈခု အဖွဈ ပါဝငျခငျြတာပေါ့ဗြာ။ ဒါကွောငျ့ ကနြေျာ့ ရဲ့ လစာ 1% ကို လှူဒါနျးတော့မှာ ဖွဈသလို ၊ ကမ်ဘာတဈဝနျးမှာ ရှိတဲ့ ဘောလုံးနဲ့ ပတျသကျတဲ့သူ အားလုံး ဒီအစီအစဉျကို ပါဝငျဖို့ ဖိတျချေါပါရစေ။
ကနြျောတို့ အနနေဲ့ ကမ်ဘာကွီးမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ ပွသနာတှေ ကို မကျြကှယျ ပွုမထားကွပါနဲ့။ လကျရှိ ကနြျောတို့ ပတျဝနျးကငျြက မွငျကှငျးတှဟော တကယျ့ အမှနျတရားမဟုတျပါဘူး။ ဒီရဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ နရောတှမှော ခကျခဲစှာ ရုနျးကနျရငျး ဘောလုံး ကစားခှငျ့ရဖို့ ကွိုစားနတေဲ့ သူတှေ ရှိပါတယျ။
သူတို့တှေ အတှကျ တတျနိုငျသလောကျ ကူညီလိုကျကွရအောငျပါ။ မွကျခငျးစိမျးတှပေျေါမှာ အခွခေပြွီး ဘဝကို ရှငျသနျခှငျ့ရဖို့ ဆိုတာ သူတို့လေးတှရေဲ့ အိပျမကျတှဆေိုတာ ကနြျောတို့ သိထားကွပွီးသားပါ……………
ကျနော် အိပ်မက် မက်နေတာ ဖြစ်မှာပါ…………#ယာဂန်ကလော့ပ်
ပထမဆုံး အနေနဲ့တော့ နည်းနည်းလေး ရှက်စရာ ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုနဲ့ စတင်ချင်ပါတယ် ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဘောလုံး ပရိသတ်တွေ က ကျနော်တို့လို မန်နေဂျာတွေ ၊ ကွင်းထဲက ဘောလုံး သမားတွေ ဆိုရင် ဘုရားသခင်တွေ လို့ မှတ်ယူထားကြလို့ပါ။ ကျနော် ကတော့ အဲဒီ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
ကျနော်လဲ ခရစ်ယာန် တစ်ယောက် ဆိုတော့ တစ်ဦးတည်းသော ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် အခိုင်အမာ ပြောနိုင်တာ တစ်ခုက ဘုရားသခင်လဲ ဘောလုံး အပေါ်မှာ ဘာမှ လုပ်ပေးလို့ မရပါဘူး။ တကယ့် အမှန်တရားက ကျနော်တို့ဟာ အမြဲတမ်းလိုလို ကျရှုံးမှုတွေ နဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။
ကျနော် မန်နေဂျာ ပေါက်စ တုန်း ကဆိုရင် ကျရှုံးမှုတွေက အရမ်းကို ကြီးမားလွန်းခဲ့ပါတယ်။
ဟိုတစ်နေ့ ည ကတော့ ကျနော်ဟာ ဖီဖာ အကောင်းဆုံး နည်းပြဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တယ်လေ ဒါပေမယ့် ဆုဖလားလေး တစ်လုံးထဲ ရယူပြီး ၊ စင်မြင့်ထက်မှာ အဲဒီဆု ကို တက်ယူနေတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မြင်ရတာ လုံးဝ သဘောမကျပါဘူး။ တကယ်တော့ အဲဒီ ဗိုလ်လုပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တယ် ဆိုတာ ကလဲ ကျနော့် ရဲ့ ဘေးနားမှာ ရှိတဲ့ လူတွေ နဲ့လဲ အများကြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော့် ကစားသမားတွေချည်းပဲ တော်လို့ မဟုတ်သလို ၊ ကလပ်အသင်းက လူတွေ ၊ နည်းပြ အဖွဲ့ဝင်တွေ ၊ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှုတွေနဲ့ တစ်နည်းတစ်ဖုံတော့ သက်ဆိုင်နေမှာပါ။ နောက်ဆုံး ကျနော့်ကို နည်းပြ ဘ၀ တစ်လျှောက် ဒီအဆင့်မျိုး အထိ တက်လှမ်းနိုင်အောင် ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ ကျနော့် မိသားစုဝင်တွေ နဲ့လဲ ပတ်သက်နေလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
အမှန်တိုင်း ၀န်ခံရရင် ကျနော့် အသက် 20 လောက် ကသာ ၊ အခုလို အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ အနာဂတ်မှာ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ ဗေဒင်ဟောမယ့်သူသာ ရှိခဲ့ရင် ကျနော်က လုံးဝကို ယုံကြည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အရွယ်မှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ ရဲ့ သင်ခန်းစာတွေကြောင့်ပဲ ကျနော့် ရဲ့ ဘ၀ဟာ အများကြီးပြောင်းလဲ သွားခဲ့ရတာပါ။
အဲဒီ အချိန်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကို လူငယ် တစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်ထားခဲ့သည့်တိုင်အောင် ၊ ကလေး အဖေဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် တစ်ခုလဲ ပိုင်ဆိုင်နေခဲ့ပြီလေ။ ပြောရရင် အသင့်မဖြစ်သေးပဲ နဲ့ ကလေး တစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီ အချိန်က ကျနော်ဟာ အပျော်တမ်းအဆင့် ဘောလုံးသမား အဖြစ်ပဲ ရှိနေသေးသလို ၊ တစ်ဖက်မှာလဲ တက္ကသိုလ် တက်နေတုန်းလေ။
ကျောင်းလခ ပေးဖို့အတွက် ရုပ်ရှင် တစ်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း တစ်ဖက် တစ်လမ်းကနေ ၀င်ငွေလဲ ရှာခဲ့ရသေးတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီ အချိန်က ရုပ်ရှင်ဆိုတာ အခုလို DVD ခေတ် မဟုတ်သေးသလို ၊ ဖလင်ခေတ်ပဲ ရှိသေးတာဆိုတော့ ၊ မနက်6နာရီ ဆိုတာ နဲ့ ဖလင်လိပ်ကြီးတွေ ထည့်ထားတဲ့ ပုံးကြီးတွေကို ကားပေါ်က တင်လိုက် ၊ ချလိုက် နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ပါပြီ။ ပုံးတွေကလဲ တော်တော်လေးတာမို့ တကယ်ကို ပင်ပန်းတာပါ။ တစ်ခါ တစ်လေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် Ben-Hur ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်လိုမျိး အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာဖို့တောင် ဆုတောင်းနေခဲ့မိပါတယ်။
ဘ၀ ဆိုးခဲ့ပုံက တစ်ညမှ5နာရီလောက်သာ အိပ်ခဲ့ရတာလေ။ မနက်ခင်းဆို ရုပ်ရှင် ဖလင်တွေ ထားတဲ့ ဂိုဒေါင် ပြေးပြီး အလုပ်လုပ်ရတယ် ၊ အဲဒီ က ပြီးတာနဲ့ ကျောင်းကို ပြေးရတယ် ၊ ညဘက်ရောက်တော့ ဘောလုံးအသင်းမှာ ထရိန်နင် ပြန်ဆင်းရတာပေါ့။ ကိုယ့် ဆန္ဒကတော့ အိမ်ကို စောစောပြန်လာပြီး ကိုယ့်သားလေး နဲ့ အချိန်တွေ ဖြုန်းပစ်ချင်တာပေါ့ဗျာ။
အဲဒီလို ခက်ခဲတဲ့ ဘ၀က ပဲ ကျနော့်ကို သင်ခန်းစာတွေ အများကြီး သင်ပေးလိုက်တာပါ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် နဲ့ အလုပ်ကို အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်တတ်တယ်လာတယ်လေ။
ညဘက် ဘော်ဒါတွေ နဲ့ ဆုံလို့ သူတို့က ဘီယာလေး သွားသောက်ကြအောင်ကွာလို့ ခေါ်လိုက်ရင် ၊ ကျနော့် စိတ်ထဲမှာ “ အေး သွားမယ်ကွာ….သောက်ကြမယ်ကွာ” လို့ ပြောနေခဲ့ပေမယ့် ၊ တကယ်တမ်းတော့ မသွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပြင် သူတို့ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းခဲ့ရတာပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော်က လူပျိုလူလွတ် တစ်ယောက် မဟုတ်တော့ဘူးလေ။
လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ သွေးသားကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ အနာဂတ် အတွက် စိုးရိမ်စိတ်တွေ ၀င်လာပြီ ဆိုရင် ၊ အဲဒီ စိုးရိမ်မှုဟာ ဘာနဲ့မှကို မတူတော့ပါဘူး။ ရင်ဆိုင်ရတာလဲ အရမ်းကို ခက်ခဲပါတယ်။ အခု ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ဆိုတာ အဲဒီ ခံစားချက်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် ဘာမှ ကို မဟုတ်တာပါ။
တစ်ခါတလေ လီဗာပူး က အသင်းတစ်သင်းကို ရှုံးနိမ့်လိမ့်လို့ ၊ ကျနော်က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြုံြး့ပုံးရွှင်ရွှင် နဲ့ ပြန်ပြီး မေးခွန်းတွေ ပြန်ဖြေနေရင် ၊ ခင်ဗျား က ဘာလို့ အဲဒီလို ပြုံးထားနိုင်တာလဲ ဆိုပြီး လူတွေက ခဏခဏ မေးကြပါတယ်။ အဲဒီ မေးခွန်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် အဖြေကို ကျနော့် သားလေး မွေးလာတဲ့ အချိန်မှာ သိခွင့်ရခဲ့တာပါ။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဘောလုံးဆိုတာ ဘ၀ ရဲ့ ဘ၀ တစ်ခုလုံးကြီး မဟုတ်သလို ၊ သေဆုံးခြင်းလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဘောလုံးကစားနေတယ် ဆိုတာ လူတွေ အသက်ကို ကယ်တင်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘောလုံး ဆိုတာ ပျော်ရွှင်မှု အပြည့်နဲ့ ကစားရမယ့် ကစားနည်းဖြစ်ပြီး ၊ လူတိုင်း အတွက် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေ မွေးဖွားပေးတဲ့ အရာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူငယ် မျိုးဆက်လေးတွေ အားကျနိုင်တဲ့ ကစားနည်းမျိုးပဲ ဖြစ်ရမှာပါ။
ဒီလို အလုံး သေသေးလေးကို ကန်ရင်း ၊ ဘ၀ ရပ်တည်မှုကို အခိုင်အမာ ရယူထားကြတဲ့ လူတွေ အများကြီး ကျနော် မြင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ မိုဆာလတ် ၊ မာနေး ၊ ဖာမင်နို တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ ဆိုရင် ဘယ်လိုမှတောင် မယုံကြည်နိုင်စရာ ကောင်းသလို ၊ အခြား ကစားသမားပေါင်း မြောက်များစွာလဲ ရှိနေပါတယ်။ ကျနော် လူငယ် ဘ၀က ဂျာမဏီမှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ဆိုတာ သူတို့တွေ နဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်တော့ ဘာမှကို မဟုတ်တော့တာပါ။ သူတို့ ဘ၀တွေမှာ ဘောလုံး လောက ကနေ စွန့်ခွာသွားချင်လောက်တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ က ခဏခဏကို ကြုံခဲ့ရပေမယ့် သူတို့ ကတော့ လက်မြှောက် အရှုံးပေးဖို့ ငြင်းဆန်ပြီး ဒီလို အဆင့်ထိ တက်လှမ်းလာခဲ့ကြတာလေ။
သူတို့တွေဟာ ဘုရားသခင်တွေ မဟုတ်ပါဘူး ၊ နတ်ဘုရားတွေ လဲ မဟုတ်ပါဘူး ။ သူတို့ဟာ ကိုယ့်အိပ်မက်ကို ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးခဲ့ကြတဲ့ သူတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့် အထင်ကတော့ ဘောလုံးဆိုတာ အမြဲတမ်းလိုလို ရှုံးနိမ့်မှုတွေ နဲ့ ကြုံနေရတဲ့ ကစားနည်းလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျက်နှာကို ပြုံးထားပြီး ၊ ကြိုးစားမယ် ဆိုရင် နောက်တစ်နေ့မှာ ခြေစွမ်း ပြနိုင်တာပဲလေ။
ကျနော်ဆိုရင်လဲ အမှားပေါင်း မြှောက်များစွာကနေ သင်ယူခဲ့ရတာပါ။ ပထမဆုံး နည်းပြ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အချိန်က အခက်အခဲတွေ အမှားတွေကို ဘယ်လိုမှ မမေ့သေးပါဘူး။ ကျနော်ဟာ မိန့်ဇ်မှာ 10 နှစ်ကျော် ကစားပေးပြီးတဲ့နောက် ၊ 2001 ခုနှစ်မှာ မန်နေဂျာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
စစချင်း ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ ပြသနာ က ဘောလုံးသမားတွေ အားလုံးက ကျနော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ။ နေ့ချင်း ညချင်းကြီးပဲ နည်းပြ ဖြစ်လာတာ ဆိုတော့ ၊ သူတို့က Boss ဆိုတဲ့ စကားတောင် မခေါ်နိုင်ပဲ Kloppo ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း နဲ့ပဲ ဆက်လက် ဝေါ်ခေါ်ခဲ့ကြတာလေ။
ပထမဆုံး ကိုင်တွယ်မယ့် ပွဲစဉ်အတွက် ပွဲထွက်ကစားသမား စာရင်း ကြေငြာမယ်လုပ်တော့ ၊ ကစားသမား တစ်ယောက်ချင်းကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး အသိပေး ပြောလိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ် ဆိုပြီး တွေးမိခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီ အိုက်ဒီယာ က တော်တော်လေးကို ဆိုးလွန်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့မှာ နှစ်ခန်းတွဲ လေးပဲ နေရာ ရှိတာလေ။ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ……….နေရာ က အများကြီး မရှိတော့ ကျနော်ဟာ နည်းပြ တစ်ယောက် ဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင် ဘယ်လို နေရာမှာထိုင်ရမလဲ ဆိုတာ……
ပြီးရင် တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် မြင်နေရတဲ့ အနေအထားမှာတောင် “ မနက်ဖြန် ပွဲမှာ မင်းကစားမယ် ၊ မင်းကတော့ မကစားဘူး” ဆိုတဲ့ စကားလုံးမျိုးကို ပြောခဲ့ရတာပါ။ ပြောတိုင်းလဲ ကစားခွင့်မရတဲ့ သူတိုင်းက ဘာလို့လဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို အမြဲတမ်း အမေးခံခဲ့ရပါတယ်။
များသောအားဖြင့်တော့ ကျနော့်မှာ သူတို့အတွက် အဖြေက မရှိခဲ့ပါဘူး။ ပြန်ပြောနိုင်တာ တစ်ခုက ငါတို့မှာ 11 ယောက်ပဲ ကစားခွင့် ရှိလို့ပါကွာ ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပါပဲ။
ကျနော့်ရဲ့ မန်နေဂျာ ဘ၀ က အဲဒီလို စတင်ခဲ့ရတာဗျ။ 2019 ခုနှစ်ရဲ့ဖီဖာ အကောင်းဆုံး နည်းပြကြီးက အဲဒီဘ၀ ကနေ လာခဲ့တာလို့ ပြောလိုက်ရင် ပရိသတ်တွေ ယုံနိုင်ကြပါဦးမလား……
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဘာစီလိုနာ ကို နူးကမ့်ကွင်းကြီးမှာ 3-0 နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ရလာဒ် က ကျနော့်ရဲ့ မန်နေဂျာ ဘ၀မှာ အဆိုးဝါးဆုံး ရလာဒ် တစ်ခု ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒုတိယ အကျော့ ပြန်ကစားဖို့ ပြင်ဆင်တဲ့ အချိန်ရောက်တော့ ကျနော် လီဗာပူး ကစားသမားတွေ ကို မှာခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နဲ့ ဒဲ့ပဲ ပြောခဲ့တာပါ။
ဒီပွဲမှာ Rocky ရုပ်ရှင်တွေထဲကတော့ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာ ထည့်ပြောဖြစ်ခဲ့သလို ၊ များသောအားဖြင့် နည်းစနစ် အကြောင်းတွေကိုပဲ အသားပေးခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ကို ပြောခဲ့တဲ့ အမှန်တရား တစ်ခုက
“ ငါတို့ဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှုး နှစ်ယောက် မပါပဲ နဲ့ ကစားရတော့မယ် ၊ ကမ္ဘာပေါ်က ဘောလုံးပရိသတ်တွေ ကတော့ ဒီပွဲဟာ ပြန်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ ပြောနေကြပီ။
ငါလဲ အရိုးသားဆုံးပြောမယ်ကွာ…….သူတို့ ပြောသလို ဖြစ်နိုင်ချေက မရှိတော့တာ ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတဲ့ အကြောင်းအရင်းက အဲဒီ ပွဲကို ရင်ဆိုင် ကစားရမှာက မင်းတို့ ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေလို့ပါ။ မင်းတို့ကို ငါယုံတယ် ၊ ငါတို့မှာ အခွင့်အရေး တစ်ခုတော့ ရှိနေလိမ့်မယ်” ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာပါ။
တကယ်တမ်းလဲ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ အဲဒီအတိုင်းပါပဲ။ တစ်ခါတလေ ဘောလုံးသမားတွေ ကလဲ လူသားတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ဘ၀ မှာ ရှိတဲ့ အခက်အခဲတွေတောင်ကို ရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လေ။
နောက်ဆုံး တစ်ခု အဖြစ် မှာလိုက်တာကတော့ “ ရှုံးခဲ့ရင်တောင် ပရိသတ်တွေ ဂုဏ်ယူနိုင်ရမယ့် ပုံစံမျိုး နဲ့ ရှုံးခဲ့ကြကွာ” ဆိုတဲ့ တစ်ခွန်းတော့ မှာခဲ့မိသေးတယ်ဗျာ။ ဒီလို ပြောရတာကလဲ ကျနော်က ကွင်းဘေးကနေ အော်နေဖို့က အရမ်းလွယ်ပေမယ့် ၊ တကယ်တမ်းကွင်းထဲမှာ ကစားရတဲ့သူတွေ အတွက်က အများကြီး ခက်ခဲတယ်လေ။ အန်ဖီးကွင်းထဲကို ရောက်လာခဲ့တဲ့ ပရိသတ်ပေါင်း 54000 ကြောင့်လဲ ကျနော်တို့ဟာ မဖြစ်နိုင်တာ တစ်ခုကို ဖြစ်အောင် လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ ဘောလုံးရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အလှတရား တစ်ခုပါပဲ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ ဖန်တီးလို့ မရတဲ့ အလှတရားမျိုးပေါ့ဗျာ……
အဲဒီ ထဲက ကံဆိုးတာက ချန်ပီယံလိဂ် သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက်လုံး သမိုင်းတွင်းသွားမယ့် အိုရီဂီ ရဲ့ သွင်းဂိုး ကို ကျနော် သေချာ မမြင်လိုက်ရတာပါ။ အာနိုး ရဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ယောက်လို တွေးခေါ်ပြီး ဖန်တီးပြသွားတဲ့ အနေအထားကို ကျနော် လွဲသွားတယ်ဗျာ။
ဘောလုံး ထောင့်ကန် ဘော ဖြစ်သွားတာတော့ မြင်လိုက်ရပါသေးတယ်။ အာနိုး က ကန်တော့မယ် ၊ ရှာကွီရီ က လိုက်သွားတဲ့ အထိ မြင်သေးတယ်ဗျ။ ကျနော်က လူစားလဲဖို့ ပြင်နေတာမို့ ၊ ကျောခိုင်းပြီး ထိုင်ခုံတန်းဆီ လှည့်လာတဲ့ အချိန်ပါ ၊ ကျနော့် ရဲ့ လက်ထောက်နည်းပြကိုလဲ စကားပြောရင်း တိုင်ပင်နေပါပြီ။
အဲဒီ အချိန်မှာ ရုတ်တရက် ကြားလိုက်ရတာက ပေါက်ကွဲထွက်သွားတဲ့ အောင်ပွဲခံတဲ့ အသံကြီးပါ။ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဘောလုံးဟာ ဂိုးပိုက်ထဲကို ရောက်သွားပါပြီ။
ကျနော်လဲ ဘန်ဝုဒ်ဘန် ဘက်လှည့်တော့ ၊ သူက ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ဆိုပြီး လှမ်းမေးပါတယ် ၊ ကျနော်လဲ မပြောပြတတ်တော့ဘူး လို့ပဲ ပြန်ဖြေလိုက်မိတာပါ။
အန်ဖီးလ် ပရိသတ်တွေ ကတော့ အမှန်အကန် အောင်ပွဲခံနေကြပါပြ….အဲဒီအချိန် လက်ထောက် နည်းပြက …ကဲ ဘော့စ် လူစားလဲဦးမလား? ဆိုပြီး မေးလိုက်တော့ ကျနော်ဖြင့် ပြုံးစိစိ ဖြစ်နေတာ အခုထိ မျက်စိထဲက မထွက်သေးပါဘး။
စဉ်းစားကြည့်ဗျာ…….နည်းပြ လုပ်လာတာ 18 နှစ် ရှိပြီ ၊ ဘောလုံးပွဲတွေ ကြည့်လာတာ နာရီပေါင်း သန်း ချီနေပြီ ၊ ဒီထဲကမှ ကျနော့် အသင်းရဲ့ သမိုင်းဝင် ဂိုးသွင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်လေး တစ်ခုကို ကျနော် လွဲချော်သွားခဲ့တာလေ။ အဲဒီ လို ဖြစ်ပြီးကတည်းက ကျနော်ဖြင့် အိုရီဂီရဲ့ သွင်းဂိုး ကို ပြန်ကြည့်နေမိတာ အကြိမ်ပေါင်း5သိန်း မကလောက်တော့ပါဘူး။
ပွဲပြီးတော့ အခန်းငယ်လေးထဲမှာ ထိုင်နေမိပါတယ်။ ဘီယာတွေ သောက်ပြီးလဲ အောင်ပွဲ မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေဗူးလေး ဘေးမှာချလို့ ၊ တစ်ယောက်ထဲ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နေရင်း ပြုံးနေမိတယ်ဗျာ။ အဲဒီ အခိုက်အတန့်မှာ ဖြစ်လာတဲ့ ပီတိတွေ ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ကျနော်ဖြင့် ဘယ်လိုမှကို စကားလုံးနဲ့ ဖော်ပြနိုင်စွမ်း မရှိတာပါ။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဆွေမျိုးတွေ ၊ မိတ်တွေတွေ အားလုံးက ရောက်နှင့်နေပါပြီ ၊ အဲဒီ ကျမှပဲ ပါတီပွဲ အကြီးကြီး လုပ်ရင်း အောင်ပွဲခံပစ်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ညလုံး စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းပြီး မောမော နဲ့ အိပ်ပျော်သွားတာ မနက်ကျမှ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။
“တစ်ဘ၀လုံး အိပ်စက်ခဲ့တဲ့ ညတွေထဲမှာ ဒီည အိပ်ရတာ အရသာ အရှိဆုံးပဲ” လို့။
ကျနော့် အတွက် ဘောလုံးဆိုတာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ထက်ပိုပြီး စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေ မွေးဖွားပေးတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ Rocky ဆိုတာ ဇာတ်လမ်းအသွင် ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပေမယ့် ၊ ကျနော်တို့က အဲဒီလိုမျိုး ဘောလုံးမှာ စွမ်းဆောင် ပြနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ မာတာ ၊ ဟမ်းမဲ၊ မီဂန် ရာပီနိုးတို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ Common Goal အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်လေးကို သဘောကျမိခဲ့တာပါ။ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အရမ်းကို ချီးကျူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဘောလုံးသမား အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း 120 ကျော်က သူတို့လစာ ရဲ့ 1% ကို ထည့်သွင်းလှူဒါန်းပြီး ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ဘောလုံးတိုးတက်ရေး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေကို ကူညီပေးခဲ့နေခဲ့တာပါ။
ဒါဟာ ချမ်းသာတဲ့ ဘောလုံးသမားတွေပဲ လုပ်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ကနေဒါ အမျိုးသမီး လက်ရွေးစင် တစ်သင်းလုံးဆိုရင် ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်သလို ၊ ဂျပန် ၊ သြစတေးလျ ၊ ကင်ညာ ၊ ဂါနာ တို့လို နိုင်ငံက ဘောလုံးသမားတွေတောင် ပါဝင်နေပါပြီ။ ဒါဟာ အနာဂတ် မျိုးဆက်တွေ အတွက် စိတ်ဓါတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ တက်ကြွက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းမျိုး ဖြစ်သလို ၊ ဘောလုံးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် သဘောတရားကလဲ ဒါပဲလေ။
ကျနော်လဲ အဲဒီ လို အဖွဲ့အစည်းမျိုးရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု အဖြစ် ပါဝင်ချင်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် ကျနော့် ရဲ့ လစာ 1% ကို လှူဒါန်းတော့မှာ ဖြစ်သလို ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ရှိတဲ့ ဘောလုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သူ အားလုံး ဒီအစီအစဉ်ကို ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြသနာတွေ ကို မျက်ကွယ် ပြုမထားကြပါနဲ့။ လက်ရှိ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်က မြင်ကွင်းတွေဟာ တကယ့် အမှန်တရားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် နေရာတွေမှာ ခက်ခဲစွာ ရုန်းကန်ရင်း ဘောလုံး ကစားခွင့်ရဖို့ ကြိုစားနေတဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်။
သူတို့တွေ အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ကူညီလိုက်ကြရအောင်ပါ။ မြက်ခင်းစိမ်းတွေပေါ်မှာ အခြေချပြီး ဘ၀ကို ရှင်သန်ခွင့်ရဖို့ ဆိုတာ သူတို့လေးတွေရဲ့ အိပ်မက်တွေဆိုတာ ကျနော်တို့ သိထားကြပြီးသားပါ……………